Drives adag External waa muhiim haddii aad isticmaasho your computer wax walba, taas oo qof kasta maalmahan falaa. Waxay yihiin habka ugu fiican si loo hubiyo in dhammaan xogta aad si fiican u kaydiyaa oo aan aad waayi doonto mid ka mid ah faylasha aad waa in aad shil computer . Aad si fudud u heli drives Dibadda, ay inta badan laga helaa dhamaan dukaamada waaweyn ee computer oo ay leedahay faa'iidooyin dhowr ah. First of dhan, waxay leeyihiin awooda badan oo si aad marnaba yeelan doonaan in ay ka welwelina meel lagu kaydiyo. Waa fududahay in la isticmaalo, dabacsan oo si sahlan loo qaadi Waxay. Laakiin mararka qaarkood ay waayi kartaa qaar ka mid ah macluumaadka aad ku noqon karaan kuwo walaac dhab.
Waxaa jira sababo badan oo ah sababta aad drive dibadda adag laga yaabaa in macluumaadka aad. Mid ka mid ah kuwa ugu badan waa in dadka qaar ay si qalad ah tirtirto dhammaan faylasha ay. Waxa kale oo laga yaabaa in aad ayaa formatted drive qaldan qalad ah oo kor ku dhamaaday guuldarro dhammaan xogta aad. Marar kale waa drive adag laftiisa in cillad kara oo keeni kara in aad iska yareyso files oo dhan. Wax kasta oo ku dhacay masixi dhammaan xogta ka wadid aad u adag, oo dhan dib aad ka heli kartaa hadii uusan si buuxda overwritten ama u kharribmay .
Sidee baad u soo kaban karto, files ka External Hard Drive?
Ka soo kabashada xogta ka bajin drive adag dibadeed aad u muuqataa sida hawl aysan suuragal ahayn. Haddii aad qabto Wondershare Data Recovery waa sida ugu fudud ee hal click. Wondershare Data Recovery Waa barnaamij caawin doona in aad soo kabsado lumay, formatted, tirtiray ama faylasha laga wadid aad u adag in talaabooyin aad u fudud. Maxaa ka xiiso badan yahay waa in ay caawin karaan in aad ka soo kabsado noocyada file oo dhan la software tan oo ay ku jiraan videos, music, waraaqaha iyo files audio.
Halkan sida inuu ka soo kabsado files ka wadid aad u adag oo isticmaalaya Wondershare Data Recovery.
Tallaabada Koowaad: Tallaabada ugu horreysa waa in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijka on your computer. Waxaad kala soo bixi kartaa Mac ama Windows Version ku xiran tahay nidaamka hawl gal. Waxaad hadda diyaar u ah inay soo kabsadaan faylasha aad.
Tani waa uu furmo suuqa aad ku arki waa in marka aad ordi Wondershare Data Recovery.
Talaabada 2: Waxaad u baahan tahay in iskaan wadid aad dibadda. Si tan loo sameeyo si loo hubiyo in wadid aad dibadda ka dibna waxay doortaan oo guji "Start" si ay u iskaan. Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka drive ah formatted dibadda ka dibna loo hubiyo in "Enable Deep Scan" sanduuq la hubiyaa. Tani waa waxa ay u egtahay.
Talaabada 3: ka dib markii baar dhammaan faylasha in la helay lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala dhashay. Waxaad go'aansan kartaa kuwa aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna la Calaameeyey. Riix soo kabsado aad u bilowdo nidaamka dib u soo kabashada.
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in aadan badbaadin files kuwa drive in dibadda.
Sida loo Iska ilaali Loss Data markii Isticmaalka ah External Hard Drive
Ka Hortagga had iyo jeer ka fiican yahay daawo si haddii aad ka fogaato yaabaa badiyay xogta aad meesha ugu horeysa, waxaad haysan lahaa in ay dhex maraan ka walwal iyo niyad xumo ah in dib yimaado. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in aad ka fogaato khasaaraha xogta dibadda waa in ay iibsadaan ah drive wanaagsan dibadda. Hubi in drive ee aad soo iibsato waxaa la sameeyey saaruhu sharci ah iyo in aad ku iibsan karaa dukaan computer sharci ah. Ka taxadar iibsan online sida laga yaabaa in aanay hubin tayada aad ilaa inta la geeyey in aad.
Marka aad soo iibsatay wadid aad dibadda, waxaa muhiim ah in ay is ogow wanaagsan waxaa ka mid ah. Iska ilaali in aad maqaal qoruhu aad u badan oo ku yaal sida ay u badan tahay in la kordhiyo waqtiga loading kaas oo sidoo kale hoos u dhigi kartaa nolosha drive dibadda u adag yihiin. Waxaa kaloo muhiim ah in aad barkinta ka your computer isticmaalka ka dib. Tani waxay kaa caawin si loo yareeyo xaaladaha meesha aad si qalad ah qaab kartaa drive doonaa. Ugu dambayn waxa aad u muhiim ah in marka aad rabto in aad u guurto xogta ka drive si aad nuqul ka halkii la dhimo. Sidaas waxaad yeelan doontaa gurmad ah haddii khasaare.
Drives adag External u baahan daryeelka, si aad si sax ah waa in ay ku kaydiso. Iska ilaali heerkulka sare, qoyaan iyo gariirka.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah drives adag dibadda. Waa kuwee mid aad u isticmaasho oo aad abid soo maray wax dhibaato ah soo gaartay xogta marka la isticmaalayo? Iyada oo macluumaadka lagu siiyey ee qodobkan, ayaad u malaynaysaa inaad awoodi doonaan in ay xaliyaan wixii dhibaato soo gaartay xogta aad leedahay lahaa mustaqbalka?
Fadlan fikraddaada iyo walaac nala oo waxaan kaa caawin doonaa in si kasta oo aanu awoodno.
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka External Hard Drive